Myat Shu - 2011 September
You are here : Myat Shu » Archives for September 2011
Published By Myat Shu On Thursday, September 29th 2011. Under ၀တ္ထု, အမှတ်တရ
ဇမ္ဗူကျွန်းလုံး သတင်းစာတိုက်ပိုင် အယ်ဒီတာ ဦးကျောက်ဒိုးကား မူလက သူ၏ သတင်းစာကို စတင်တည်ထောင်ရာ၌ ၀ါသနာကြီးလွန်း၍ တည်ထောင်ခဲ့ခြင်း မဟုတ်ပေ။ ထီးထမ်း လမ်းလျှောက် ပွဲစားလုပ်၍ စီးပွားရှာခဲ့ရာ၊ ကုန်သည်လောကနှင့် စပ်ဆက်၍ ဈေးနှုန်းသတင်းများကို ကုန်သည်တို့ အချိန်မီ သိရှိနိုင်စေရန် စေတနာဖြင့် ဈေးနှုန်းသတင်းစာတစ်စောင်ကို တည်ထောင်ခဲ့သည်။ ဦးကျောက်ဒိုးငယ်စဉ်က စာအရေးအသား ၀ါသနာပါသည်။ ဗဟုသုတအရာ၌လည်း အတော်အတန် နှံ့စပ်သည်။ ထို့ကြောင့် မိဘရိုးရာ ကုန်သည်အလုပ်ကို လုပ်ခဲ့ရာတွင် သူ၏ခေတ်က အလွန်ကျော်ကြားသော သူရိယသတင်းစာ၌ ကုန်သည်တို့နှင့် ပက်သက်သော ဆောင်းပါးများကို မောင်ကျောက်ဒိုး ဟူသော အမည်ရင်းနှင့် ရေးသားခဲ့သည်မှစ၍ စာဖတ်ပရိသတ်တို့က သူ့ကို ပွဲစားမောင်ကျောက်ဒိုးအနေဖြင့် သိသည်ထက် သတင်းစာဆရာပေါက်စမောင်ကျောက်ဒိုးအနေဖြင့် ပို၍ ... Continue Reading
မကြည့်စကောင်း ကြည့်စကောင်း ငယ်ငယ်တုန်းက ဓါတ်ရှင်အကြောင်း (အပိုင်း ၄)
Published By Myat Shu On Friday, September 23rd 2011. Under သီချင်း၊ ရုပ်ရှင်, အမှတ်တရ
ခံစားမှုနှင့်ယှဉ်သော……… လူငယ်ဘ၀ ဆယ်တန်းမအောင်သေးခင် အထက်တန်း ကျောင်းသားဘ၀နဲ့ ဆယ်တန်းကို လွန်မြောက်လို့ တက္ကသိုလ် ရောက်တဲ့ကာလ… ဒီကာလနှစ်ခုမှာ အချိန်က သိပ်မကွာပေမယ့် စိတ်ခံစားမှုကတော့ အများကြီး ကွာသွားပါတယ်။ ဆယ်တန်းအောင်လို့ တက္ကသိုလ်ဆိုတာကြီးကို တကယ် မတက်ရသေးတဲ့အချိန်မှာတောင် မြကျွန်းညိုညိုတက္ကသိုလ်တို့ တက္ကသိုလ် တမာတန်းတို့ သစ်ပုတ်ပင်တို့ ဂျပ်ဆင်တို့ အမိတက္ကသိုလ်တို့ ရေနီမြောင်းတို့ စိန်ပန်းရိပ်တို့ဆိုတဲ့ တက္ကသိုလ်နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အသုံးအနုန်းကို ဖတ်ရကြားတာနဲ့တင် ရင်တွေ ခုန်နေပါတယ်။ တက္ကသိုလ်နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အချစ်ဝတ္တုတွေကို ဖတ်လို့ ခံစားလို့ကောင်းတဲ့ အချိန်ပေ့ါ။ အဲဒီအချိန်မှာ မောင်ဝဏ္ဏရဲ့ “ပန်းတွေနဲ့ဝေ”တက္ကသိုလ်နောက်ခံ ၀တ္တုကနေ ရှပ်ရှင်အဖြစ် ထွက်လာပါတယ်။ မင်းသားက ညွန့်ဝင်း၊ မင်းသမီးက ခင်ယုမေ။ ဒုတိယမင်းသားက အောင်လွင်။ လူငယ်ဘ၀ ... Continue Reading
မြန်မာပြည်တွင် NGO တွေ အများကြီး ပြုပြင်ရဦးမည်ဟု စက်တင်ဘာ ၁၁ ရက်နေ့က မြန်မာနိုင်ငံ လူမှုရေးလုပ်ငန်းပညာ နှီးနှောဖလှယ်ပွဲတွင် ဒေါက်တာ အောင်ထွန်းသက်က ပြောကြားသည်။ လက်ရှိ မြန်မာပြည်တွင် NGO ဆိုင်းဘုတ်များ ထောင်ထားသော်လည်း တကယ် လက်တွေ့ သွားကြည့်သည့်အခါ တချို့အဖွဲ့များတွင် လူတစ်ဦးမှ မရှိဟု ဆိုသည်။ လိပ်စာတစ်ခုနှင့် လှူဒါန်းမှုအား သရုပ်ပြ၍ လုပ်နေသောကြောင့် NGO များ နာမည်ပျက်စေသဖြင့် ယင်းကဲ့သို့ မလုပ်သင့်ဟု ၎င်းက ဆိုသည်။ ကိုယ့်အိတ်ထဲ ကိုယ်ထည့်နေသော NGO များ ရှိနေသမျှ နိုင်ငံတော်ဘက်မှ အသိအမှတ်ပြု (Registration) လက်မှတ်ရဖို့ မလွယ်ကူဟု သိရသည်။ လက်ရှိ မြန်မာပြည် NGO လောကတွင် ... Continue Reading
မျောက်ထောင်တဲ့ နည်းတစ်နည်းက အတော်လေး စိတ်ဝင်စားစရာ ကောင်းလှသဗျ။ သည်လို… အုန်းသီးတစ်လုံးကို အလုံးမပျက်စေဘဲ အတွင်းက အသားတွေကို ခြစ်ထုတ်လိုက်တယ်။ ပြီးတော့ အဲ့ဒီအုန်းသီးကို သစ်ပင်မှာဖြစ်ဖြစ်၊ မြေကြီးပေါ် စိုက်ထားတဲ့ စို့တစ်ခုမှာဖြစ်ဖြစ် ကြိုးတန်းလန်းနဲ့ ချည်ထားတယ်။ အုန်းသီးရဲ့ အောက်ခြေမှာကျတော့မှ အပေါက်ရှည်ရှည်ကလေး တစ်ပေါက် ဖောက်ပြီး အုန်းသီးထဲကို အစာထည့်ထားလိုက်တယ်။ အဲဒီအပေါက် ရှည်ရှည်လေးက မျောက်ရဲ့ လက်ဝါးတစ်ဝါးစာ ၀င်သာရုံ၊ ဟတယ်ဆိုရုံလေး ဖောက်ထားတာ။ လက်သီးဆုပ်ဆိုရင် မ၀င်သာဘူး။ ထွက်လည်း မထွက်သာဘူးပေါ့ဗျာ။ အဲလိုနဲ့ အုန်းသီးကို အသာလေးချထားလိုက်တယ် ဆိုရင်ပဲ အစာနံ့ရတဲ့ မျောက် ရောက်လာတော့တာပဲ။ အုန်းသီးထဲမှာ အစာရှိမှန်း ကိုရွှေမျောက်က သိသပေါ့။ သည်မှာတင် ခက်ခက်ခဲခဲ အပေါက်ထဲ သူ့လက်ကလေး ထိုးထည့်လိုက်တယ်။ ... Continue Reading